Egwuregwu nke Dice – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Egwuregwu nke Dice – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na nchịkwa | Ọktoba 14, 2021
Kedu ihe bụ 'Game of Dice'?
* Jiri atụmatụ pụrụ iche jide mmeri.
– Jiri nka pụrụiche dị ka “Kwaa”, “Dọrọ” na ndị ọzọ.
– N'elu 150 kaadị ịmepụta atụmatụ dị iche iche.
– Ngwongwo weghaara ma na-abawanye ụgwọ ọrụ site na egwuregwu dị aghụghọ.
– Ndị mmegide na-akụda akụ iji merie!
* Dakọtara ozugbo & ụdịdị dị iche iche
– Gwuo otu egwuregwu 1vs1 ma ọ bụ 1vs1vs1 maka egwuregwu ọsọ ọsọ.
– Soro enyi gị kpakọrịta maka egwuregwu otu 2vs2.
* Atụmatụ dị ịtụnanya dị ka Guilds, Mkparịta ụka ozugbo na ndị ọzọ
– Soro ndị otu na-emeta enyi ọhụrụ!
– Soro na ngwụcha izu ụka Guild maka Guild gị wee nweta ụgwọ ọrụ dị ịtụnanya.
– Gbanwee ozi wee chọta ndị otu na-akparịta ụka ozugbo.
CHINEKE na-akwado ọtụtụ asụsụ gụnyere :
– Asụsụ akwadoro: Bekee / Asụsụ Japan / Chinese omenala / Chinese dị mfe / Korean
◆ Nkwado ndị ahịa
Biko kpọtụrụ nkwado ndị ahịa anyị(https://joycity.oqupie.com/portals/402) maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ kwuo
※ Egwuregwu Dice chọrọ njikọ netwọkụ maka dakọtara ozugbo.
※ Egwuregwu a bụ n'efu, mana ị nwere ike họrọ ịkwụ ezigbo ego maka ụfọdụ ihe egwuregwu. Biko mara na ụfọdụ ihe akwụ ụgwọ nwere ike agaghị akwụghachi ya dabere n'ụdị ihe ahụ.
◆ Nweta ikike na egwuregwu JOYCITY
1. Ịnweta ịkpọ ma jikwaa oku ekwentị
(Mgbe egwuregwu malitere) Ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịchọpụta ngwaọrụ maka Nbanye ọbịa (mmalite ozugbo). Ịnweta [Kpọọ ma jikwaa oku ekwentị] gụnyere ozi iji chọpụta ngwaọrụ, ma ị gaghị enwe ike ịbanye na egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na ị jụ arịrịọ ohere.
2. Ịnweta kọntaktị
(Mgbe ịbanye n'ime egwuregwu ahụ) Ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịchọpụta akaụntụ Google edebanyere aha na ngwaọrụ maka nbanye Google. [Ịnweta kọntaktị] gụnyere ozi iji gụọ akaụntụ Google. Ị gaghị enwe ike ịbanye na egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na ịgọnarị arịrịọ nnweta.
3. Ịnweta Foto, Mgbasa ozi, na faịlụ
(Mgbe ị na-edebanye aha / dezie profaịlụ) Ịnweta [Foto, Mgbasa ozi, na faịlụ] echekwara na ngwaọrụ a chọrọ mgbe ị debanyere aha/ dezie onyonyo profaịlụ akaụntụ. Agaghị emetụta nbanye na egwuregwu egwuregwu ọbụlagodi na ịgọnarị ohere ahụ.
* Akpaokwu ejiri na [ ] nwere ike ịdị iche dabere na ngwaọrụ na ụdị OS
◆ Otu esi agbanyụọ ikike ngwa
[Gam akporo 6.0 na elu]
Ntọala ngwaọrụ > Ngwa > Kpatụ ngwa ahụ > Ikikere > Gbanyụọ ikike ngwa
[N'okpuru Android 6.0]
Ọ nweghị ike gbanyụọ ikike ngwa n'ihi sistemụ arụmọrụ dị iche iche. Hichapụ ngwa ka gbanyụọ ikike
* Usoro eji na ntuziaka nwere ike ịdị iche dabere na ngwaọrụ na ụdị OS.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Dice, egwuregwu
← Ọrụ: Ụwa Ọhụrụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ezinụlọ Addams: Ụlọ ihe omimi – Ụlọ egwu! Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
Ị ga -abụrịrị wee banye biputere a comment.
Octopus Games: K Challenge 456 Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Pico Park Puzzle – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Bo – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
My Little Universe – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Red Light Green Light Shooter Cheats&Mbanye anataghị ikike
Egwuregwu Squid – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ihe ịma aka squid: Survival Game – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Agha Epic: Ocheeze – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
EspritBoom – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ejiji Princess – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike